ဖမ်းဆီးခံရသူတွေ လွှတ်ပေးဖို့ ကျောက်တော်မှာ ဆန္ဒပြ
ရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်မြို့က သံခါးတောင်ရွာမှာ မနေ့က ဖြစ်ပွားတဲ့ မီးရှို့မှုနဲ့ ဒီမနက်က တခြားရွာတရွာ မီးရှို့မှုမှာ ပါဝင် ပတ်သက်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံရပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူ ၁၂ ဦး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ မြို့လူထုက ဒီနေ့ ဆန္ဒပြကြပါတယ်။
အခုလို လူတထောင်လောက် ဆန္ဒပြနေတာ စစ်ဦးစီးမှူး ပထမတန်း ဦးဆောင်တဲ့ တပ်ရင်းတရင်း ရောက်လာပြီး ခြိမ်းခြောက်တယ်လို့ ဒေသခံတဦးက ပြောပြပါတယ်။
"ရခိုင်ပြည်က ဖမ်းသွားတဲ့ ပြည်သူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆိုပြီး ကျွန်တော်တို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြကြပါတယ်။ တပ်ရင်းတရင်း ရောက်လာပါတယ်။ ပစ်မယ် ခတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ ထပ်ပြီးတော့ ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း တောင်းဆိုမှုလေး လုပ်တာပါလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ က ပစ်မယ်ခတ်မယ် ဆိုပြီးတော့မှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရောက်လာပြီးတော့ ပြေပြေလည်လည်လေး ဖြစ်အောင် အဆင်ပြေအောင် အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးပါမယ်ပြောပြီးတော့ လူစုခွဲလိုက်ပါတယ်"
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက တရားဥပဒေအရ ဖြေရှင်းမယ်ပြောတဲ့အတွက် မနက် ၁၀ နာရီက စတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲက မွန်းလွဲ ၂နာရီ ၄၅ မိနစ်လောက်မှာ လူစုကွဲသွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီဆန္ဒပြပွဲ ဖြစ်ပွားလာရတဲ့ အကြောင်းရင်းခံကိုလည်း အဲဒီဒေသခံကပဲ ပြောပြပါတယ်။
"မနေ့က ကုလား ရခိုင် အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်တော်မြို့နဲ့ ၆ မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ သံခါးတောင်ဆိုတဲ့ နေရာလေးရှိပါတယ်။ ၅ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ ဖြစ်တာကို ၈ နာရီလောက်မှာ ဒီက တလက ၉ က ဦးဆောင်ပြီး သွားကြပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း လုံခြုံရေးအရ စောင့်နေတဲ့ ၉ ယောက်ကို ဖမ်းသွားပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို လက်နက်နဲ့ ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မှ ကျောက်တော်ကြီးစခန်းကို ပို့ပြီးတော့မှ ချုပ်ထားပါတယ်။ ဒီမနက် ၅ နာရီလောက်မှာ နောက်တရွာမှာ ထပ်ပြီးတော့ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရခိုင် ၄ ဦးကို တလက ၉ က ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ဘယ်သူမှလည်း အဆက်အသွယ် မလုပ်ရပါဘူး"
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ကျောက်တော်နဲ့ မြောက်ဦးက ရှေးဟောင်းဘုရားတွေ ဖျက်ဆီးခံရတာမရှိဘူးလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးက ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်း ကျောက်တော်မြို့ကို ဒီနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းနဲ့ မြောက်ဦးမြို့မဟာမုနိဘုရားမှာ လုံခြုံရေးအခြေအနေ ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်း ဒေသခံ တဦးက ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ထုတ် အစိုးရသတင်းစာမှာလည်း ကျောက်တော်မြို့နယ် အပေါက်ဝကျေးရွာမှာ ဇွန် ၁၅ ရက်နေ့ မွန်းတည့်က ဖြစ်ပွားတဲ့ မီးကွင်းပစ်မှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ လူတွေကို ဒေသအာဏာပိုင်တွေ၊ လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ အကြမ်းဖက်မှု မလိုလားတဲ့ ပြည်သူတွေ ပူးပေါင်းပြီး အမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးမိရေး ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
rohingyas, as illegal infiltrators, have been reported to have bribed law enforcement authorities heavily. this must stop - and my request to the law enforcers is that take the bribe, as much as you can, but work impartially and in the interest of Myanmar, not the illegal kalas.
Jun 30, 2012 05:32 PM
Jun 19, 2012 02:37 AM